8 -da sare ee Deeqaha waxbarasho ee Ehlers Danlos Syndrome 2022
Boggan waxaa laga helayaa macluumaad ku saabsan deeqda waxbarasho ee Ehlers Danlos Syndrome si loogu oggolaado dadka sida xoogga leh u saameynaya cilladdan inay gaaraan himilooyinkooda waxbarasho.
"Ehlers Danlos Syndrome" weligeed ma maqlin, miyaad leedahay? Mise aqoon uma lihid weedha? Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay dad qaba cilladan oo xitaa aadan aqoon waxa ay tahay.
Hagaag halkan waxaan kaa saaraynaa mugdiga the
Waa maxay Ehlers Danlos Syndrome (EDS)?
EDS waa koox ka mid ah cudurada la iska dhaxlo ee saameeya ama daciifiya unugyada isku xira ee taageera maqaarka, kala-goysyada, lafaha, darbiyada xididdada dhiigga, seedaha, seedaha, iyo xubno kale oo badan iyo unugyo.
Ciladaha ku jira unugyada isku xidhka ayaa sababa astaamaha iyo astaamaha xaaladahan kuwaas oo ka bilaabma kala-goysyada jilicsan oo jilicsan ilaa dhibaatooyinka nolosha halista ku ah.
Ehlers Danlos Syndrome miyuu u qalmaa naafonimo?
Waxaa jira heerar EDS ah, oo haddii aad leedahay mid khafiif ah oo kuu oggolaanaya inaad shaqeyso markaa uma qalmi doontid dheefaha naafada.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan awoodin inaad shaqeyso sababo la xiriira calaamado daran awgood waxaad u qalmi doontaa naafo iyo sidoo kale faa'iidooyinka kale ee naafanimada oo ay ku jiraan Caymiska Naafada ee Sooshiyaal Sikiyuuriti (SSDI) iyo Dakhliga Dheeraadka ee Amniga (SSI).
Waxaan haynaa maqaal horey loo daabacay oo ku saabsan faa'iidooyinka naafanimada ee kor ku xusan, taasi waa, Caymiska Naafada ee Sooshiyaal Sikiyuuriti (SSDI) iyo Dakhliga Dheeraadka ee Amniga (SSI). Waa gargaarro ay dowladdu u fidiso dadka naafada ah, haddii aad buuxiso dhammaan shuruudaha adiguba waad ka kasban kartaa faa'iidadan naafada ah.
Halkaan ka akhri halkan.
Shakhsiyaadka leh EDS ee doonaya inay sii wataan waxbarashadooda kulliyad, jaamacad, ama barnaamijka tababarka waxay dalban karaan Ehlers Danlos deeqaha waxbarasho ee aan ku liis garaynay boggan. Mid kasta oo ka mid ah deeqaha waxbarasho wuxuu qaataa shuruudo kala duwan oo ay tahay inaad buuxiso si aad u kasbato.
Anaga oo aan sii dheerayn, aan u tagno deeqdan waxbarasho ee Ehlers Danlos Syndrome ndrome
1 Waa maxay Ehlers Danlos Syndrome (EDS)?
2 Ehlers Danlos Syndrome miyuu u qalmaa naafonimo?
3 Ehlers Danlos Syndrome Deeqaha
3.1 Sanduuqa deeqda waxbarasho ee EveryLife Foundation RAREis
3.2 Deeqda waxbarasho ee 'Hannah Bernard Memorial'
3.3 Bryson Riesch Paralysis Foundation (BRPF) deeqda waxbarasho
3.4 NBCUniversal Tony Coelho Deeq waxbarasho
3.5 Deeqaha Naafada Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Karman
3.6 Hannah Ostrea Memorial Scholarship
3.7 Deeqda waxbarasho ee McBurney ee Ardayda Naafada ah
3.8 Charlotte W. Deeqaha Deeqaha Aasaasiga ah ee Ardayda Naafada ah
3.9.1 Talo soo jeedin
Ehlers Danlos Syndrome Deeqaha
Ma jiraan deeqo waxbarasho oo badan oo loogu talagalay shakhsiyaadka ka cabanaya EDS, laakiin waxaa jira deeqo waxbarasho oo naafonimo guud ah oo ay dalban karaan. Hoos kadhegayso:
Bryson Riesch Paralysis Foundation (BRPF) deeqda waxbarasho
Deeqaha Naafada Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Karman
Hannah Ostrea Memorial Scholarship
Mu'asasada 'EveryLife Foundation' waxay aasaaseysaa Sanduuqa deeqda waxbarasho ee RAREis si loogu caawiyo shakhsiyaadka la nool cudur naadir ah iyadoo lagu taageerayo himilooyinkooda waxbarasho. Deeqdan ayaa la bixiyaa sanadkiiba waxaana lagu qiimeeyaa $ 5,000 ilaa iyo 35 qof.
Codsadeyaashu waa inay ka weynaadaan 17 sano, deganaanshaha Mareykanka, oo laga helaa cudur naadir ah sida Ehlers Danlos Syndrome (EDS). Abaalmarintaan waxay ka mid tahay Ehlers Danlos Syndrome deeqda waxbarasho maadaama ay tahay cudur naadir ah oo aad codsan karto abaalmarintan.
Shuruudaha kale waxaa ka mid ah qoraalka hadda ee fasalada iyo foomka xaqiijinta cudurka, maqaal sharraxaya yoolalkaaga iyo sida helitaanka deeqda waxbarasho ay kaaga caawineyso inaad iyaga gaarto. Deeqaha waxaa lagu bixiyaa iyada oo ku saleysan qoraalada, awoodaha hogaaminta, ka qeyb qaadashada howlaha iskuulka iyo bulshada, khibrada shaqo, waxqabadka tacliimeed, iyo baahida dhaqaale.
Deeqdan waxbarasho ayaa loo heli karaa shakhsiyaadka la dagaallamaya xaaladaha xanuunka adag sida Ehlers Danlos Syndrome (EDS), Isku-dhafka Xanuunka Xanuunka Gobolka (CRPS), iyo Small Fiber Neuropathy (SFN).
Qof kasta oo qaba mid ka mid ah xaaladaha xanuunka ee kor ku xusan iyo kuwa kale ee aan halkan ku taxnayn ee doonaya inay ku sii wataan waxbarasho dugsiga sare, kuleejo, jaamacad, ama barashada internetka ayaa dalban kara $ 600 deeq waxbarasho.
BRPF waxay sidoo kale taageertaa deeqda waxbarasho ee Ehlers Danlos Syndrome oo loogu talagalay dadka la dhibaataysan laakiin wali waxay rabaan inay sii wataan waxbarashadooda.
Shakhsiyaadka qaba Ehlers Danlos Syndrome ama ilmahoodu naafo yahay ayaa dalban kara deeqdan waxbarasho. Waa $ 2,000 illaa $ 4,000 deeq waxbarasho oo la siiyay laba illaa saddex ka mid ah shakhsiyaadka noocan oo kale ah ee horeyba u diiwaangashan ama ku dhow barnaamijka afar ama laba sano ee kulleejada.
Codsaduhu waa inuu haystaa ugu yaraan GPA ee 2.5 oo leh qormo 200 ereyo ah ama wax ka yar oo sharraxaya sababta uu codsaduhu ugu qalmo deeqda waxbarasho iyo qoraallada rasmiga ah ee rasmiga ah. Deeqdan waxbarasho ayaa loo heli karaa dadka ku nool Mareykanka laakiin mudnaanta ayaa la siin doonaa kuwa ka socda Wisconsin.
Waxaa loogu magac daray Tony Coelho - wakiil hore oo Mareykan ah - iyo inuu qeyb ka noqdo bixiyeyaasha deeqaha waxbarasho ee Ehlers Danlos. Abaalmarintani waxay ka caawisaa shakhsiyaadka qaba cudurka inay gaaraan himilooyinkooda waxbarasho, NBCUniversal waxay bixisay abaalmarin sanadle ah oo deeq waxbarasho ah tan iyo 2015 dadka naafada ah.
Deeqdani waxay sidoo kale u fidsan tahay naafonimada kale ee guud sidoo kale waxaa la siiyaa sideed shahaadada hoose iyo ardayda qalin jabisa ee naafada ah sida EDS laakiin wali waxay rabaan inay ku sii wataan xirfad ku saabsan isgaarsiinta, warbaahinta, ama qaybta madadaalada.
Waa inaad isku aqoonsataa shaqsi naafo ah
Waa inuu daneeyaa raacitaanka shahaadada isgaarsiinta, warbaahinta, ama warshadaha madadaalada - dhammaan kuwa waaweyn waxaa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan.
Sida magacaba ka muuqata, deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay dadka naafada ah ee adeegsada kursi curyaan ama aalado kale oo guurguura. Codsadeyaasha deeqdan waxbarasho waa inay hadda ka diiwaangashan yihiin xarun sare oo ku taal Mareykanka waana inay ahaadaan 16 sano ama ka weyn.
Codsaduhu waa inuu ilaaliyaa ugu yaraan CGPA ee 2.0 si loogu tixgeliyo deeqda waxbarasho iyo qoraallada waa in la bixiyaa inta lagu jiro arjiga. Waad qori doontaa oo aad soo gudbin doontaa qormo, waxaad bixin doontaa caddeynta naafonimada dhaqdhaqaaqa sida warqadda dhakhtarka iyo sawir muuqaal ah oo naftaada ah oo lagu dhejin doono internetka haddii aad ku guuleysato abaalmarinta.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho waa $ 500 oo la siin doono laba arday, waxaa sidoo kale la bixiyaa sannad kasta haddii ay dhacdo inaad seegtay sanadka hadda socda.
Ma isweydiineysaa sababta ay deeqdani u tahay halkan?
Hagaag, dadka qaba EDS daran waxay ubaahan yihiin kuraasta curyaamiinta iyo isticmaalka aaladaha kale ee dhaqdhaqaaqa si ay u wareegaan haddii aad ka mid tahayna ha ku seexan deeqdan waxbarasho. Deeqda Naafonimada Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Karman waxay si buuxda ugu qalantay hal deeq waxbarasho Ehlers Danlos si ay uga caawiso dadka naafada ah.
Deeqdan waxbarasho waxaa loo aasaasay sharaftii yar ee Hannah Ostrea oo u dhimatay cudur aad u dhif ah oo ku dhaca hiddo-wadaha da'da saddex jir. Deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay ardayda naafonimada naadir ka ah, sida Ehlers Danlos Syndrome, laakiin weli doonaya inay sii wataan barnaamijka shahaadada jaamacadeed.
Deeqdan ayaa la siiyaa sanadkiiba laba arday oo heli doona abaalmarinta $ 1,000 iyada oo ku saleysan qoraalladii la soo gudbiyay, guulihii waxbarasho ee ugu fiicnaa, iyo adeegga bulshada. Tani Hannah Ostrea Memorial College waa mid ka mid ah Ehlers Danlos Syndrome deeqaha waxbarasho si looga caawiyo raadinta waxbarasho ee shakhsiyaadka kula nool.
Shuruudaha u-qalmitaanka deeqda waxbarasho waa;
Codsaduhu waa inuu ka diiwaangashan yahay kulliyad la aqoonsan yahay oo ku taal Mareykanka laba ama afar sano oo ah barnaamijka shahaadada ah.
Waa inuu noqdaa muwaadin Mareykan ah ama degane sharci rasmi ah
Waalidka, bukaanka, ama walaalaha bukaanka laga helo cudur dhif ah oo caafimaad oo aad u adag (nool ama dhintay). Da'da waqtiga cudurka lagu ogaanayo cunugga ay dhibaatadu saameysey waa inuu noqdaa 17 sano ama ka yar.
Hayso GPA-ga 2.5 ama ka sareeya (GPA looma tixgaliyo waalidiinta)
Ma helin deeqdan waxbarasho hore.
Tani waa deeq waxbarasho guud oo loogu talagalay dadka ku nool hal nooc oo naafonimo ah ama mid kale sida Ehlers Danlos Syndrome, taas oo ka dhigaysa inay u gudubto mid ka mid ah Ehlers Danlos Syndrome.
Deeqda waxbarasho ee McBurney ee loogu talagalay Ardayda Naafada ah ayaa kaliya looga kireysan karaa Jaamacadda Wisconsin-Madison, taas oo ah, ardayda doonaya inay codsadaan deeqdan waxbarasho waa inay iska diiwaangeliyaan shahaadada koowaad ama barnaamijka qalin jabinta ee jaamacadda.
Waad dalban kartaa deeqda waxbarasho markii aad leedahay cillad la soo sheegay sida Ehlers Danlos Syndrome (EDS) iyo sannadkaagii ugu dambeeyay ee dugsiga sare waxaadna higsaneysaa inaad isqorto Jaamacadda Wisconsin-Madison. Waxaad sidoo kale codsan kartaa haddii aad horey uga diiwaangashan tahay jaamacadda.
Dukumiintiyada kale ee lagu codsado deeqda waxbarasho waxaa ka mid ah laba warqad tixraac ah iyo qoraal akadeemiyadeed. Waxay u furan tahay muwaadiniinta Mareykanka, deganaanshaha joogtada ah, iyo ardayda ajnabiga ah ee doonaya inay u yimaadaan Mareykanka sidoo kale.
Halkan ka codso deeq waxbarasho
Mu'asasadani waxay siisaa maalgelin waxbarasho ardayda naafada ah sida Ehlers Danlos Syndrome, cillad maskaxeed, autism, indho la'aan, iwm.
Deeqaha si toos ah looma siinayo arday gaar ah halkii laga siin lahaa kulleejooyin iyo jaamacado iskaashi la leh Newcombe Foundation.
Tani waxay soo afjareysaa deeqaha waxbarasho ee Ehlers Danlos Syndrome iyo sidaan horay u soo sheegay, ma jiraan qaar badan oo ka mid ah deeqdan waxbarasho laakiin kuwa halkan lagu xusay waa inay sameeyaan. Dadka naafada ah sida Ehlers Danlos Syndrome iyo naafonimada kale ee guud kuma koobna kaliya noocyadan gaarka ah ee deeqaha waxbarasho.
Waxaad sidoo kale ballaarin kartaa raadintaada oo dalban kartaa deeqaha waxbarasho ee guud ee ardayda caadiga ah ay codsadaan, sida deeqda waxbarasho ee Vanier Canada, deeqaha waxbarasho ee MasterCard Foundation, iyo kuwa kale. In kasta oo shuruudahoodu badiyaa ay sarreeyaan haddii aad u malaynayso inaad la kulmi karto ka dib horay u sii wad oo dalbo iyaga.
Ha dhigin ukuntaada oo dhan hal dambiil, dalbo deeqaha waxbarasho ee naafada iyo waliba deeqaha guud iyo sidoo kale inaad hesho taageero waxbarasho inta aad heli karto. Waxaad leedahay riyo aad ku raad gasho, ha u oggolaan naafonimadaadu inay ku xadidaan, sii socdaan, kor u kacaan, oo ay la kulmaan yoolalkaaga shaqo.
Deeq waxbarasho oo buuxa Deeqda Masters Deeq waxbarasho oo diblooma ah Talooyinka deeqaha waxbarasho Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka
Previous Post:13 Dugsiyada Hoose Sare ee Berwick